kabili shaft motor Amanani akamuva shaft motor abakhiqizi
Kuthengiswa ama-motor angamagesi angama-240 volt
Umkhiqizi we-Industrial Double shaft motor, iCrane Duty Motor, Amaphampu, iDaily Shaft Motor neMotor Electric Phase Electric Motors enikelwa abakwaSogears.
Umkhiqizi wezimoto waseChina iThaft Double Shaft
Ingabe usukulungele ukuthenga imoto shaft ephindwe kabili? Izinhlobo ezahlukahlukene ezintathu zama-shaft motor amabili atholakala kuwe
Nazi ezinye izithombe zesethenjwa sakho.
I-Double Shaft Motor AC Electric
Dual shaft AC motor ngegiya ibhokisi elinikeza i-torque enhle ne-rpm kuma-voltages aphansi. sha sha kabili sha sha kagesi motor 380V high torque 100kg DC motor dc skwele gear motor.
I-Double Shaft Fan / iBlower Motor
Imoto yohlobo lwe-DC enebhokisi lamagiya elinamathiselwe emseleni, esebenza ngomshini kagesi esebenza ngogesi kusuka ku-ngqo yamanje (DC) .Motor enepulasitiki eyi-RPM engu-150. I-motor kagesi eyi-AC emibili eyenzelwe ezasolwandle, izimoto, imishini yokuxhasa inhlabathi, izimayini.
I-UNIVERSAL DOUBLE SHAFT MOTOR
Le nguqulo inezimoto eziyi-12V ezihlanganisiwe ze-DC ezinamabhulashi wempilo ende ende ehlanganiswa ngensimbi eyi-31.25: 1. Sinesitoko futhi sinokufinyelela kuyo yonke iDaily Shaft Blower Motors yeBard, Marvair neminye imikhiqizo.
Nazi eziningi ze-DOUBLE SHAFT MOTORIndlela Oyifunayo
Nawa amanani amaningi aphansi, izinga eliphakeme eliphindwe kabili le-shaft dc motors enomhlaba wonke. Uma ufuna ukuthenga imoto eshibhile engu-150 rpm eye shaft motor, khetha u-r150 rpm dual shaft motor kusuka lapha. “Imoto shaft ephindwe kabili” ine- "shafts ezimbili" ephuma ecaleni le-motor. I-Hollow-shaft motors 1 PM6/1PM4 - Ukuxhaswa Kwemboni.
Uma unemibuzo ungasithinta futhi, sizokujabulela ukukusiza! Inkonzo yethu yamakhasimende i-inthanethi usuku lonke. Iminyaka yolwazi lokukhiqiza izimoto imane nje ikunikeza imoto esezingeni eliphakeme neqinile. Thola lapha Abakhiqizi bezimoto zakwaDaily Shaft, abakhiqizi beDual Shaft Motors.
Sesha futhi uqhathanise zonke izinqola ze-Nokia ngezincazelo ezigcwele zobuchwepheshe kuphela ku-Matrix Yezimboni. Sonke sinayo ikhathalogi yama-Nokia motor motors ikhathalogi etholakalayo, Ukucaciswa Okugcwele kwamahhashi: 20 hp Voltage: 410 volts Isigaba: 3 RPM: 1755 rpm Uhlaka: 215TZ.